AKHRISO: Guddiga Doorashooyinka Jubbaland oo jawaab adag u diray Beesha Caalamka, kuna hanjabay.
KISMAAYO(P-TIMES) – Guddiga Doorashooyinka iyo Xaduudaha ee Jubbaland ayaa soo saaray warqad rasmi ah oo ay uga jawaabayaan qoraalkii xalay ka soo baxay Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan, kaas oo uu kaga hadlayay arrimaha doorashooyinka jubbaland.
Guddigu waxay soo taxeen dhammaan geedi socodkii doorashada guddiga iyo howlaha doorashooyinka, waxay si adag u beeniyeen eedaha la xariira in aysan dhexdhexaad aheyn, waxayna ku tilmaameen guddiga lagu doonayo in lagu dhibaateeyo Shacabka Jubbaland.
Gudoomiyaha guddiga oo ku saxiixan qoraalkan, wuxuu sheegay in u kulankii u dambeeyey ee dhexmaray iyaga iyo Beesha Caalamka ay dhammaan ka wada hadleen qodobada hadda tabashadu ka taagan tahay.
XOG: Kenya & Itoobiya oo kulan deg deg ah ka yeeshay xaaladda Jubbaland.
Mr, Xamse ayaa sheegay in ay tixgaliyeen dalabkii caalamiga ahaa ee kudarida waqtiga jadwalka, sidaas awgeed ay 3 maalmood ku dareen oo ku e’eg berrito, waxayna si cad u sheegeen in aysan u joojin doonin cidii aan isdiwaangalin.
Sharciyada ay u leeyihiin qabashada doorashada Madaxweynaha ayay aad u difaaceen guddigu, waxayna sheegeen in awoodaas uu siinayo dastuurka Jubbaland ee la ansixiyey 4 sanno kahor, waxay sheegeen in talaabooyinka ay wadaan mucaaradka diidan is-diwaangalinta ay yihiin kuwa aan u hiilin doonin nabadgalyada.
Jawaabta guddiga waxaa ka muuqda hadalo caro badan ku dheehan tahay iyo in ay u dhaqaaqi doonan sida ay meelmar uga dhigi lahaayeen doorashada Madaxweyne-nimada oo ay qaban doonaan 22-ka bisha, taas oo ay sheegeen in ay tahay sharciyad rasmi ah.